ESI EMEGHE OTU ENYI NA STEAM - STEAM - 2019
Ọ bụghị n'ọnọdụ ọ bụla mkpọka nke ngosi - ihe ngosi - na ụdị isi ha na-eji onye ọrụ ahụ. Enwere otutu ihe kpatara ya. Na aha nke ịmepụta ngosi ngosi, ị gaghị emeli ihe na-adabaghị na iwu na iwu. Ya mere i kwesiri idezi slide.
Ihe ngosi PowerPoint nwere oke nhọrọ nke ngwaọrụ ndị ga-eme ka ị gbanwee ọtụtụ akụkụ ndị ahụ.
N'otu oge ahụ, a ga-akpọ usoro a n'ụzọ zuru ụwa ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-ele Analogs PowerPoint, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ atụmatụ ka na-efu na ngwa a. Otú ọ dị, na opekempe, ịnwere ike idezi ihe ngosi.
Gbanwee ọdịdị anya
Ihe ngosi ntaneti na-arụ ọrụ dị mkpa, na-eme ka njirimara zuru ezu na ụda nke akwụkwọ ahụ dum. Maka na ọ dị mkpa iji hazie ya.
Ngwa ndị achọrọ dị na tab. "Kere" na nkụzi ngwa.
A na-akpọ ebe mbụ "Gburugburu". N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ nhazi nhọrọ ịkọwapụta akọwapụtara. Ha na-agụnye ndepụta dịgasị iche nke mgbanwe - ndabere, ihe ndị ọzọ achọpụtara, nhọrọ ederede na mpaghara (agba, ụdị, nha, nhazi), na ihe ndị ọzọ. I kwesiri ighaa onye nke obula iji nyochaa ot'odi ka odi na njedebe. Mgbe ị pịa isiokwu ọ bụla n'otu n'otu, a na-etinye ya n'ọrụ na-emetụta ya kpamkpam.
Onye ọrụ ahụ nwekwara ike pịa bọtịnụ pụrụ iche iji gbasaa ndepụta zuru ezu nke ụdị dị.
Mpaghara "Nhọrọ" enye 4 nhọrọ maka isiokwu ahọrọ.
N'ebe a, ị nwere ike pịa bọtịnụ pụrụ iche iji mepee windo ọzọ iji dozie nhọrọ. N'ebe a, ị nwere ike ịme ntọala kachasị elu na nke kachasị edozi ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma na ya.
Mpaghara "Hazie" na-arụ ọrụ iji weghachite ma tinye nhazi ọnọdụ dị mma karị.
Banyere nke ikpeazụ ga-ekwu okwu iche iche. Na "Ụdị ndabere" nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche. A na-ekewa ha n'ime 3 taabụ.
Nke mbụ bụ "Mejupụta". N'ebe a, ị nwere ike ịmepụta nhọrọ zuru ezu maka ihe ngosi ndị ahụ site na iji njuputa, usoro juputara, ihe oyiyi, na ihe ndị ọzọ.
Nke abụọ bụ "Mmetụta". Nke a bụ ọnọdụ nke ihe ndị ọzọ dị mma.
A na-akpọ nke atọ "Na-ese" ma na-enye gị ohere ịhazi ntọala dị ka ndabere ihe oyiyi.
Mgbanwe ọ bụla a na-eji na-akpaghị aka. Okwesiri iburu n'uche na nhazi a n'uzo di otua na-eme ihe na ntinye ederede nke onye ozo choputara. Iji gbasaa nsonaazụ ahụ dum, enwere bọtịnụ n'okpuru. "Tinye ntanye niile".
Ọ bụrụ na ị họrọbeghị ụdị ụdị ejiji, ọ ga - enwe naanị otu taabụ - "Mejupụta".
O di nkpa icheta na uzo ozo choro izi ezi nke onye ogwu a maka imezi ya. Ya mere emela ngwa ngwa - ọ ka mma ịgafe ọtụtụ nhọrọ karịa igosi ọha na eze ihe na-adịghị mma.
Ịnwekwara ike ịgbakwunye ihe nke gị. Iji mee nke a, tinye ihe pụrụ iche ma ọ bụ ụkpụrụ n'ime ihe ngosi ahụ, pịa aka na nri ma họrọ nhọrọ na menu nchịkọta "N'azụ". Ugbu a ọ ga - egosi na ndabere ma ghara igbochi ọdịnaya ọ bụla.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa itinye aka na ntinye ọ bụla na aka. Ya mere, ọ ga-aka mma ịtinye ihe ndị ahụ eji achọpụta na template, mana nke a bụ ihe ọzọ.
Nhazi nlekọta na ndebiri
Ihe nke abuo nke di nkpa maka ihe nfeghari bu ọdịnaya ya. Onye ọrụ ahụ nweere onwe ya ịhazi ọtụtụ ọnụọgụ abụọ gbasara nkesa ebe maka itinye nke a ma ọ bụ ozi ahụ.
Maka nke a, a na-eji nhazi usoro. Iji tinye otu n'ime ha na slide, ịkwesịrị ịpị aka-nri na slide na ndepụta na aka ekpe ma họrọ nhọrọ site na menu ndozi "Nhazi".
Ngalaba dị iche ga-apụta, ebe a ga-ewepụta nhọrọ niile dịnụ. Ndị mmepe nke usoro ihe a na-enye ndebiri maka ihe ọ bụla.
Mgbe ị pịrị na nhọrọ ịchọrọ, a ga-eji nchịkọta nhọrọ a ga-etinye aka na slide kpọmkwem.
Ekwesiri ighota na akwukwo ohuru nile nke agaji kee ya mgbe o ga ejikwa uzo ihe omuma a.
Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile ka ndebiri ihe niile nwere ike izute mkpa onye ọrụ ahụ. Ya mere ị ga-achọ ịmepụta ụdị nke gị na nhọrọ niile dị mkpa.
Iji mee nke a, tinye tab "Lee".
N'ebe a, anyị nwere mmasị na bọtịnụ ahụ "Ihe ngosi ihe ngosi".
Mgbe ịpị ya, usoro ihe a ga-agbanwe na ọnọdụ pụrụ iche maka ịrụ ọrụ na ndebiri. Lee ị nwere ike ịmepụta onwe gị site na iji bọtịnụ ahụ "Tinye Ntọala"…
... ma dezie onye ọ bụla dịnụ site na ịhọrọ site na listi mpaghara.
N'ebe a, onye ọrụ ahụ nwere ike ime ka ọ bụrụ ntọala ọ bụla maka ụdị slides, nke ga-emecha mee ihe na nkwupụta. Ngwa nhazi na taabụ "Ihe ngosi ihe ngosi" kwe ka ị gbakwunye ebe ọhụrụ maka ọdịnaya na isiokwu, hazie ụdị eserese, resize. Ihe a niile na-eme ka o kwe omume ịmepụta template n'ezie pụrụ iche maka slide.
Akaabụ ndị fọdụrụ ("Home", "Tinye", "Ịmegharị" wdg) na-enye gị ohere ịmepụta slide ahụ n'otu ụzọ ahụ dị ka isi ihe ngosi, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịtọ fonti na agba maka ederede.
Mgbe ị kwụsịrị ịmepụta template gị, ị ga-enye ya aha pụrụ iche iji mara ọdịiche dị n'etiti ndị ọzọ. A na-eme nke a iji bọtịnụ. Kpọgharia aha.
Ọ na-anọgide na-apụ na ọnọdụ nke na-arụ ọrụ na ndebiri site na ịpị bọtịnụ. "Na-emechi ụdị ngosi".
Ugbu a, na-eji usoro ahụ dị n'elu, ị nwere ike itinye ntanetị gị na ihe ọ bụla slide ma jiri ya na-aga n'ihu.
Onye ọrụ ahụ pụkwara ịgbanwe n'ụzọ dị mfe mgbanwe nke ibe nke ngosi. O di nwute, naanị ị ga-edezi akwụkwọ ahụ dum, n'otu n'otu, enwere ike ịnye ọkwa ọ bụla nke ya.
Ihe omumu: Otu esi emegharia ihe ngosi
Akụkụ ikpeazụ nke na-eche banyere ihe nkiri ahụ bụ ịmepụta mgbanwe. Ọrụ a na - enye gị ohere ịkọwa mmetụta ma ọ bụ mmegharị nke otu etiti ga - eji dochie anya ọzọ. Nke a na-enye gị ohere iji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe n'etiti ibe, na n'ozuzu ọ dị ezigbo mma.
Ntọala nke ọrụ a dị na taabụ otu aha ahụ na nkụzi ihe omume - "Transitions".
A na-akpọ ebe mbụ "Gaa na slide a" na-enye gị ohere ịhọrọ mmetụta nke otu slide ga-eji dochie anya ọzọ.
Ịpị na bọtịnụ kwekọrọ na-agbasawanye ndepụta nke mmetụta niile dịnụ.
Maka mgbakwunye ntọala ọzọ, pịa ebe a na bọtịnụ. "Ngalaba Emetụta".
Ebe nke abụọ bụ "Oge Ngosipụta Ngosi" - mepee ohere maka edezi ogologo oge ngosi nke akpaka, ụdị ịtụgharị mgbanwe, ụda n'oge mgbanwe na ihe ndị ọzọ.
Iji tinye mmetụta ndị e nwetara maka ihe ngosi niile, pịa bọtịnụ ahụ. "Mee ka mmadụ niile".
Na ntọala ndị a, ngosi ahụ dị mma mgbe ị na-eme nchọgharị. Ma, ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ngosi slide na ntụgharị dị otú ahụ nwere ike ime ka oge ngosi ahụ dịkwuo ukwuu site n'eziokwu bụ na ọ ga-ewe naanị ụgwọ nke transitions. Ya mere, ọ kachasị mma ime mmetụta dị otú ahụ maka obere akwụkwọ.
Nhọrọ nke nhọrọ a agaghị eme ka ngosi ahụ dị mma, Otú ọ dị, ọ ga-enye ohere iji nweta ihe dị elu site na slide ma n'akụkụ anya ma na usoro nke arụmọrụ. N'ihi ya, ọ bụghị mgbe nile ka ọ ga-ekwe omume ịmepụta akwụkwọ na ibe.